Kedu ụdị nkịta m bụ? Etu esi amata ụdị nkịta ọ bụla - Apụta
Kedu ụdị nkịta m bụ? Etu esi amata ụdị nkịta ọ bụla
Nwere obi ụtọ na ndị mara mma aja aja anya họọrọ gị n'ụlọ nkịta . Fill dejupụtara mpempe akwụkwọ ma buru ya laa. Formsdị ya na-ekwu na ọ bụ ụdị agwakọta agwakọta; mana ị na-eche ụdị ụdị nne na nna ya?
N’isiokwu a, anyị etinyegoro ụfọdụ ndụmọdụ ga - enyere gị aka ịmata ụdị nkịta gị bụ ma nye gị nka iji mata ọtụtụ nkịta na - aga ije n’okporo ámá.
Ebe ị ga-achọ nyocha DNA n'ezie iji chọpụta ihe nketa nkịta gị na ụdị nke nkịta gị, ndụmọdụ ndị a ga-enyere gị aka ịmata ọtụtụ nkịta site na anya.
Etu esi ekwu ihe bu nkita nke nkita m di
Ọdịdị Nkịta - Isi
Ọdịdị nkịta - ntị
Ọdịdị Nkịta - Uwe
Ọdịdị nke nkịta - Agba
Ọdịdị Nkịta - ọdụ
Ọdịdị Nkịta - Nchịkọta
Nwaleenụ nkà gị - ihe izu bụ nkịta nkịta m
Nyocha DNA iji chọpụta ụdị
Ọtụtụ narị nkịta dị iche iche tupu anyị agbakwunye ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ụdị ndị na-emepụta ụdị na ndepụta ahụ.
Ọ gwụla ma gị na ndị nkịta na-arụ ọrụ mgbe niile, ọ nwere ike isi ike ịchọpụta kpọmkwem ụdị ìgwè na-ele gị anya. Obi dị m ụtọ, mgbe anyị lere anya nke ọma na enwere ụfọdụ isi ihe na-enye ya:
Nkịta nwere nhazi ọkwa atọ nke ụdị isi: Dolicocephalic (n'aka nri), Brachycephalic (aka ekpe aka ekpe), na Mesocephalic (aka ekpe aka ekpe)
Isi nkịta bụ ihe enyemaka na-enye aka dịka e nwere atọ isi okpokoro isi ụdị nhazi ọkwa maka nkịta :
Dolicocephalic - Ndị a bụ ogologo imi, ma ọ bụ karịa ụdị nkịta dị ogologo dị ka Afghan Hound ma ọ bụ Collie.
Brachycephalic - chydị Brachy bụ ndị dị larịị ihu, ụdị mkpụmkpụ gbara agba dị ka Shih Tzu, Pug, Boxer ma ọ bụ French Bulldog.
Mesocephalic - Ndị a bụ ụmụ okorobịa ahụ n'etiti dị ka Labrador retriever, the German Shepherd or Dalmatian.
Ntị ntị ntị (etiti), floppy ntị (aka ekpe) na ogologo ntị (n'aka nri)
Mgbe anyị na-ele isi ha, anyị nwere ike ịgwa ọtụtụ ihe na ntị ha. Dogsfọdụ nkịta edoziwo, ntị dị mma dị ka West-Highland White Terrier ma ọ bụ Onye Ọzụzụ Atụrụ German.
Ndị ọzọ nwere floppy ntị dị ka Beagle ma ọ bụ Dachshund. Anụmanụ na-anụ anụ na-enwe ogologo ntị ka ha na-enyere ọnyà isi ka ha soro.
Workingdị na-arụ ọrụ, ụdị nchedo ga-enwe ntị ntị ka ọ ga-echedo ha (ha ga-anụ iyi egwu ngwa ngwa). Ndị na-egwu mmiri akụkọ ihe mere eme ga-enwe ntị dina ala iji gbochie mmiri ịbanye n'ime ntị ha.
Ọzọ anyị nwere ike ile anya n'uwe ha. Bredị na-arụ ọrụ, ndị ga-apụ na ihe ndị ahụ na-enwe uwe mkpuchi abụọ. Uwe mkpuchi ahụ dị ala ga-eme ka ha dị ọkụ na ntutu ntutu na-eche nche ga-echebe site na mmiri ozuzo na / ma ọ bụ snow.
Ugboro abụọ a na-ekpuchi ekpuchi gụnyere German Shepherd, Alaskan Malamute na Labrador. Udiri udiri Terrier nwere uwe mkpuchi.
Uwe mkpuchi mmiri nwere akwa mkpuchi buru ibu iji mee ka ha kpoo ọkụ na uwe elu na-adịghị mma nke na-ejide unyi na mmiri; na-edebe ha ọcha.
Uwe mkpuchi poodle dị na ya mere ka ha nwekwuo mmiri ma dika ọ bụ naanị otu akwa, ọ daghị ha mgbe ha na-egwu mmiri. Uwe mkpuchi dị nro nke achọpụtara na greyhound ma ọ bụ whippet nyere aka na ọsọ ha na ịdị mfe nke ịgagharị na ikuku.
Agba bụ ihe kachasị ike iji mee ihe mgbe a na-amata ụdị nkịta.
Anyị nwekwara ike ịgwa ọtụtụ ihe banyere nkịta site na agba ha. Nwere ike ịchọta nkịta ndị nwere agba abụọ ma ọ bụ ndị nwere agba atọ dị ka Cocker Spaniel. Enwere ike ịhụ ha dịka Dalmatian. Brefọdụ udiri anumanu bu jikota ma ọ bụ dapple.
Mkpụrụ ndụ Merle akpata mottling ma ọ bụ patches nke na agba na i nwere ike ịhụ iberibe anya na agba ma ọ bụ dị iche iche akpụkpọ ink. Dappling yiri nke ahụ, mana ị ga - ahụkarị Dachschund dappled.
Lelee ọdụ ha, ọ kwụ ọtọ, dị mkpụmkpụ, gbagọrọ agbagọ, ha nwekwara ọdụ? Ndị dinta na-arụ ọrụ na-enwekarị ọdụ ọdụ ha iji gbochie mmerụ ahụ dịka ụjọ ma ọ bụ spaniels.
Ọ bụghị naanị na ọdịdị ha ga-enye ha, kamakwa omume ha.
May nwere ike ịgaghị enwe ike ịkọwapụta njirimara kpọmkwem, ị nwere ike ịnwe echiche na ha sitere n'ụdị nkịta ụfọdụ:
Nkịta na-egwu egwuregwu na-arụsi ọrụ ike ma na-eche nche; ndị a gụnyere Labradors , Spaniels na Ndi eweghachi.
Hound jupụtara na ume; ndị a gụnyere Beagle, Basenji na Coonhound.
Bredị egwuregwu ụmụaka dị obere n'ibu ma buru ibu n'omume. Ha gụnyere Affenpinscher, Havanese na Maltese.
Bredị ahịhịa ndị ahụ na-azụ anụ nwere ọgụgụ isi ma nwee ọgụgụ isi mana ha nwere ike ịnwe ike ịzụrụ obere ụmụaka! Ndị a gụnyere Belgian Malinois, Border Collie na Pembroke Welsh Corgi.
N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ntị ozugbo. Nnukwu ntị tụọ aro na enwere ike ịbụ Chihuahua n'ime ebe a. Lee uwe elu ahụ. Ọ bụ wiry. Ọ ga-adị mfe kwere na e nwere ụfọdụ terrier na ebe a kwa.
Thecha agba ebe a nwere ike ịkọ ọtụtụ ụdị anụmanụ; nwa na ọcha bụ ihe a na-ahụkarị. Ulo a na-achapu anya na-egosi na ị na-edozi ahụ oge niile. Ọ bụkwa otu akwa oyi akwa. Ogologo ogologo nwere ike ịpụta mmalite nke ụjọ. Nwere ike nke a Jack Russell Terrier gafere Poodle?
Uwe a na-atụgharị ọnụ na-atụ aro poodle ozugbo! Ma lee otú o si guzoro. Ọzọkwa, lee uwe agba dị iche iche na ụkwụ ya. Nke a nwere ike ịbụ Bedlington Terrier na Poodle gafere?
Igwe agba na nkpuchi ihu na-eti mkpu Belgian Malinois mana ntị ndị ahụ nwere ezigbo ọmarịcha Patterdale Terrier?
Uwe uwe ahụ na ogologo ebe a na-egosi Collie? Ma nwa na tan agba? ka Onye Ọzụzụ Atụrụ German na-atụ aro ? Ọ nwere ike ịbụ Collie cross GSD?
Agba ya na-atụ aro Onye ọkpọ? Ma lee anya na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ siri ike? Ha dị ka nnukwu Dane paws anyị.
Anyị nwere ike ịtụle ihe nkịta ndị a dị ka ya, yana etu omume ha si yie nke ụdị ụfọdụ. Nanị ụzọ ị ga-esi mata nke ọma ụdị nkịta ị nwere bụ mee nnwale DNA . DNA bụ ihe mejupụtara mkpụrụ ndụ ihe nketa maka ihe ọ bụla dị ndụ. Onye ọ bụla mmadụ ma ọ bụ anụmanụ nwere koodu kpamkpam.
Imirikiti ule Dog DNA na-agụnye iwere ntim site na nsị gị ma zipụ ya maka nyocha. Ule n'ozuzu na-efu ihe ruru $ 60 ma ọ bụ karịa ma enwere ike ịme gị na nkasi obi nke ụlọ gị.
E nwere ụlọ ọrụ dị iche iche na-enye nnwale DNA Dog, na-adịkarị ọnụ karịa ule ahụ, ka nkịta na-azụkarị ụlọ ọrụ nwere nchekwa data ha. Dị ka usoro nchekwa data niile, izi ezi ga-akawanye mma ka ụlọ ọrụ na-anakọta data karịa. Ha ga - enwe eriri DNA iji tulee atụ.
Ozugbo ị nyere iwu ka ihe nnwale DNA gị, ị ga-ewere swab site na ntanye nke nkọlọ gị. Will ga-eweghachi ihe nlele ahụ, dịka ntuziaka dị na kit ahụ yana n'ime izu 2-4 ị ga-enweta nsonaazụ gị. Ule a ga - amata, ebe enwere ike otu ụdị dị ọcha na nkịta gị.
N'agbanyeghị na enweghi ọnụ ọgụgụ siri ike na-ekwupụta etu nyocha nkịta DNA ziri ezi, enwere nchegbu na ọ bụrụ na dataset adịghị adị na nchekwa data ebe a na-anwale sample ahụ, mgbe ahụ ozi ahụ agaghị egosi. Na nkenke, ọ bụrụ na nkịta gị nwere ìgwè dị ụkọ na ha; ụkọ iji ghara ịdị na nchekwa data, ị gaghị ama.
Dị ka ọ dị nfe ịhụ nkịta dị ọcha, ọ nwere ike isiri anyị ike karị ma ọ bụrụ na anyị na-anwa ịchọpụta ngwakọta na osisi anyị.
Site na ile anya n’ile ha anya, udi isi ha na udiri ha, nti ha, udiri uwe ha na udiri o kwere omume ichoputa udiri anumanu.
Ọbụghị naanị nke ahụ, ha nwere ike ịkpa agwa dịka ụdị ụfọdụ; igwu ala dika oku okpu.
Nanị ụzọ ị ga-esi mata nke ọma ụdị nkịta ị nwere bụ ime nyocha DNA; nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ụdị ha dị na dataset n'ezie.
Ma, anyị ejighị n'aka ma akụkụ nke ihe ọchị na-eche ma na-achọpụta ụfọdụ atụmatụ na nuances?
Ka anyị mara otú ị si banye na ajụjụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọta atụmatụ dị iche iche.
Nwere Ike Nkita Riri Ogbe? Iwu Nri Atọ
Komondor Dog Breed Information & Ajụjụ
ụmụ nkịta nwere oke ọbara ọbara
black lab German onye ọzụzụ atụrụ mix ụmụ nkịta
kedu ihe nkuzi poodle dị
ọkpọ ọkpọ na ụmụ nkịta pitbull
ole eze dị n'ọnụ nkịta
na -etinye ihe nkịta